Ikwesị Ntụkwasị Obi nwere ike ẹkedori kaadị mgbanwe
Ịghara Ịgba n'Èzí Investments, a ike na-elekọta $2.5 puku ijeri na jisiri akụ, na-akpa nkata na buildout nke ngwaahịa na-ga-inupụ ahịa maka Bitcoin na-esonụ larịị.
Ọzọkwa, Ikwesị Ntụkwasị Obi na-ego na-ewu a digital akpan owo exchange, dị ka onye na esịtidem ọrụ ad. The ike na-achọ ka a DevOps usoro engineer “aka engineer, ike, na idokwa a Digital Asset mgbanwe ma a ọha na onwe ígwé ojii.”
The ike na-arụ ọrụ na mkpọrọ ngwọta maka kaadị, dị ka ọrụ ọzọ ad.
Ọ bụrụ na Ịghara Ịgba n'Èzí ọma malite ndị a ngwaahịa, ọ ga na-anọchi anya otu n'ime ndị kasị Nkea site a Wall Street ike n'ime ahịa maka digital akụ.
Ọ bụ uru arịba ama, Ikwesị Ntụkwasị Obi na CEO, Abigail Johnson, bụ a Nkwado nke Bitcoin.
Ọ bụrụ na Ịghara Ịgba n'Èzí ka ẹkedori a kaadị mgbanwe àjà, ọ ga-achọghị ịzụ n'etiti nnukwu Nkea site a nnukwu Wall Street ike n'ime nascent kaadị ahịa, nke guzo banyere $350 ijeri.
Thailand ọnwụnwa akụ etiti cryptocurrency
Bank of Thailand si gọvanọ Veerathai Santiprabhob gosiri na a na-adịbeghị anya okwu na-emepe emepe a N'ogbe akụ etiti digital ego bụ ugbu a na mmetụta dị aṅaa ka akụkụ nke mba wider mgbalị trialing blockchain technology dị iche iche ndi.
The oru ngo, aha ya bụ Inthanon, na-ekere òkè aha Thailand si tallest ugwu, na-achọ ka ike akụ onwe blockchain dabeere cryptocurrency mee interbank azụmahịa ma ngwa ngwa ma dị ọnụ ala.
O kwuru na okwu:
“Mgbalị ndị a ga-kpuchie ụzọ maka ngwa ngwa ma dị ọnụ ala azụmahịa na nkwado ruru ka obere intermediation mkpa tụnyere nke ugbu a na usoro.”
Northern Trust faịlụ patent maka na ịchekwa nzukọ nkeji na blockchain
Financial ọrụ ike Northern Trust ndibọhọ a patent maka akwado ndekọ nke nzukọ iji blockchain tech.
The usoro utilizes a usoro nke smart contracts weghara data metụtara nzukọ, tinyere ihe ndekọ nke onye na-aga (ndụ site na ngwaọrụ na ha nwere ike na-ebu), Mgbe ọmụmụ ihe wee ebe na ebe.
Northern Trust hones na a kpọmkwem eji ikpe, omume data, na ọ na-ekwu na ike si wider na-emekarị nke na-ekpokọta arụmọrụ data site a na-ekesa usoro.
Coinbase na-enwe ọganihu na-usoro ala ike
Cryptocurrency exchange Coinbase mara ọkwa Wednesday na ọ nọ na-eme strides n'ebe ya ihe mgbaru ọsọ nke na-arụ ọrụ a Federally usoro ore-dealer.
Chief ọrụ mara na president Asiff Hirji dere na otu ụlọ ọrụ na blog post na ike bụ na usoro nke na-enweta a ore-dealer ikike. The ụlọ ọrụ na-ezube na-achọ ihu ọma na U.S. Securities na Exchange Commission (sec) na Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) na-enye blockchain dabeere ala.
Kraken Daily Market Report maka 06.06.2018
$118M ahịa gafee ahịa niile taa
Mark Cuban si Dallas ...
June 29, 2018 na 10:23 AM